तपाईं स्कूल उमेर एक छोरी छन्? त्यसैले, तपाईं स्कूल सुन्दर केश समस्या हुँदा, स्थिति थाहा छ। मिनेट अधिक पाँच भन्दा एक कृति सिर्जना मा खर्च गर्न - हरेक आमा त्यो आकर्षक देख्यो, र सोही समयमा कपाल आफ्नो अध्ययन हस्तक्षेप गर्दैन, र अर्को ठूलो इच्छा, हरेक दिन उनको एक राजकुमारी बनाउन बारेमा सपना। तपाईंले यो अव्यावहारिक छ भन्न सक्छ। किन हो? मुख्य कुरा हो - एक सानो कौशल र इच्छा छ, र अरू सबै कुरा बाहिर आउन पर्छ।
अनुभवी आमाहरु देखि सल्लाह
सुन्दर स्कूल केश अर्थ सौंदर्य उपस्थिति, तर पनि यसको मालिक सत्यता र सान्त्वना मात्र छैन। आफ्नो बच्चा गरेको छोटो कपाल भने, यो उनको एक फैशन सैलुन दिन राम्रो छ। बस धेरै जटिल छैन। त्यो एक साधारण कोर्नु को मद्दतले क्रममा यसलाई राख्नु सक्ने महत्त्वपूर्ण छ। मिति गर्न, बिक्री गर्ने बाल सजाउनु त गाह्रो छैन, विभिन्न बाल सामान धेरै छ। यो पनि छोटो र मध्यम लम्बाइ बाल नजर rims मा धेरै लाभदायक छ। तिनीहरूले छवि एउटा विशेष आकर्षण दिन र एकै समयमा आफ्नो अनुहार मा झर्ने देखि किसिमहरु राख्नुहोस्।
लामो बाल "पुच्छर" मा संकलित गर्न सकिन्छ। यो विशेष गरी छाडा बाल curlers प्रयोग गरेर कर्लिंग वा अग्रिम प्रयोग घुमाउरो गर्न सकिन्छ देखिन्छ कि त। अब तिनीहरूले नरम सामाग्री बनेको र प्रयोग गर्न धेरै सजिलो रूपमा बेचैनी गर्न छुटकारा छैन बित्तिकै। तपाईँ यस्तो हालतमा छैन दुरुपयोग गर्न सकिन्छ कि सम्झना। सुन्दर rezinochkoy, एक फूल वा अन्य सामान संग Barrette हुन सक्छ पुच्छर को आधार सजाउनु।
यी सुझावहरू प्रयोग गर्नुहोस्, र आफ्नो छोरी हुनेछ सबैभन्दा सुन्दर केश। गर्व स्रोत - स्कूलमा, त्यो कुनै पनि महिला, पनि सानो बाल लागि रूपमा, खुशी र राम्रो मुड हिंड्न थियो।
braiding braids लागि विकल्प
लट braids नजर पनि धेरै राम्रो र सुग्घर छ। आफ्नो विविधता हडताली। र तपाईं जस्तो केहि लट कहिल्यै गर्नुभएको पनि भने, यो मूल्य एक प्रयास गर्नुहोस्, सरल विकल्प सुरु हुने छ। उदाहरणका लागि, चुल्ठो, प्रकार बनेको "फ्रान्सेली" अन्य मात्र एक मन्दिर मा स्थित। यो बुनाई गर्न सिक्दै, तपाईंले समस्या को छुटकारा प्राप्त हुनेछ "स्कूल सुन्दर केश!" तपाईं निर्देशन, चुल्ठो संख्या परिवर्तन संग परीक्षण र उनको रिबन र कृत्रिम फूल मा बुनाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै आफ्नो कल्पना मा निर्भर गर्दछ।
बराबर भागमा कपाल विभाजन, यो एक साथ चुल्ठो चार, छ वा आठ चुल्ठो सम्भव छ। यो जसबाट (जस्तै braids साँझ plait गर्न सक्नुहुन्छ) Hairstyles सिर्जना बिहान जायका relieves, धेरै प्रभावकारी र विभिन्न mousses र मोम एक दिन भन्दा जस्ताको तस्तै रहने संग देखिन्छ। तर यो यस्तो विकल्प यस्तो छुट्टी रूपमा, कहिले काँही मात्र मान्य छन् भनेर खातामा लिन आवश्यक छ। आखिर, आफ्नो बाल राति आराम गर्नुपर्छ र स्टाइल उत्पादनहरु adversely केश को स्वास्थ्य असर गर्न सक्छ। परीक्षण गर्न नडराऊ, र यो तपाईं दोकान को कला मा नयाँ दिशा संग आएको छ कि सम्भव छ।
कसरी braids बुनाई गर्न सिक्न?
धेरै फैशन पत्रिका तपाईं सजिलै स्कूल लागि सुन्दर Hairstyles पाउन सक्नुहुन्छ। फोटो उनीहरूले भेट कसरी बुझ्न मदत गर्नेछ। र मास्टर-कक्षाहरू पढेर उहाँले देखे के बारम्बार सक्षम हुनेछ। र पहिलो पटक होइन निराश गर्छन, धेरै राम्रो तरिकाले बाहिर आउनेछ गरौं, कौशल अनुभव आउँछ।
स्कूल सुन्दर केश अब समस्या छ!
क्षतिग्रस्त बाल को बहाली सबै भन्दा राम्रो कस्मेटिक्स संग सजिलै जान्छ
बाल के र कसरी व्यवहार गर्न के, कट छ
Blossoming बादाम (फोटो)। जब बादाम फूल?
ध्वनि निद्रामा र घाँटी चोट छैन - तकिया inflatable मदत
रूसी अभिनेत्री Elena Vladimirovna Kutyreva: जीवनी, परिवार र फिलिम क्यारियर
सबैभन्दा उपयोगी ढाँचाको openwork crochet: योजना, फोटो
Crab लाठी पनीर संग भरी
भिक्टोरिया - अफ्रीका मा सबै भन्दा ठूलो ताल
बांस मोजे - जीवनको एक नयाँ गुण